कोरोना संक्रमण निको भएपछि किन पोजिटिभ देखिन्छ ? – Upahar Khabar
कोरोना संक्रमण निको भएपछि किन पोजिटिभ देखिन्छ ?
प्रकाशित मिति : २४ बैशाख २०७७, बुधबार १२:४० May 6, 2020
काठमाडाैँ – सनसिटी अपार्टमेन्टका ५८ बर्षीय पुरुष र नारायणी अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका २ पुरुषमा फलो अप जाँचको क्रममा कोरोना संक्रमण पुन: पोजिटिभ देखिएको छ । यसबाट आम नागरिकमा अन्योलता देखिएको छ । यस्ता केस अमेरिका, कोरिया, चीन लगायत धेरै देशमा देखिएका छन् । यसका कारण देहाय बहोजिम छन् ।
कोरियामा निको भएका २.१ % मा केहि हप्तापछि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको KCDC ले जनाएको छ ।
त्यस्तै चीनमा ५ – १० % मा निको भएको केहि हप्ता पछि पोजिटिभ
कोरोना परिक्षणमा प्रशस्तै फल्स पोजिटिभ र फल्स नेगेटिभ रिपोर्ट आउँछ | कहिलेकाहीं स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीबाट पर्याप्त स्याम्पल लिएका हुँदैनन् । स्याम्पलको संकलन, सुरक्षण, परिवहन र परिक्षणमा बिशेष मेहेनत नगर्ने हो भने गलत रिपोर्ट आउन सक्छ ।
भारतीय क्वारेन्टाइनमा नेपालीहरुको विचल्ली, भारतीय अधिकारीद्वारा दुर्व्यवहार (भिडियो सहित)